ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Estonia Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine Isi-Umbundu Isi-Urdu IsiBasque IsiBhunu IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaya IsiNdebele (SaseZimbabwe) IsiNepali IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTarascan IsiTatar IsiTlapanec IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu
OFakazi BakaJehova bakha indlunkulu yabo yesikhathi esizayo eWarwick, eNew York. Kusukela ngo-May kuya ku-August 2014, izisebenzi zokwakha zathuthuka kakhulu eSakhiweni Sokunakekelwa Kwezimoto, iSakhiwo Sokuqondisa Nesezinkonzo Zomkhaya kanye nezakhiwo zokuhlala u-C no-D. Lo mbukiso wezithombe ubonisa omunye womsebenzi owenziwa ngaleyo nkathi ematasa.
Umdwebo wendawo yaseWarwick lapho isiphothuliwe. Ukusuka phezulu kuya kwesobunxele:
Amahhovisi Okuqondisa/ISakhiwo Sezinkonzo Zomkhaya
May 1, 2014—Isakhiwo SaseWarwick
Indlela indawo ebukeka ngayo uma usekhoneni eliseningizimu-ntshonalanga, ubheke enyakatho phezu kwechibi iSterling Forest Lake (noma, iBlue Lake). Nganeno kwechibi, kusetshenzwa endaweni ezoba yingaphansi lesakhiwo sokuhlala u-D. Eceleni kwechibi, kwakhiwa izindonga zikakhonkolo zesakhiwo sokuhlala u-C.
May 14, 2014—Indawo Yokuhlanganisa Okwakhiwayo Engekho Esakhiweni
Kuhlanganiswa ikamelo lokugeza elibizwa nge-pod. I-pod inezinhlaka zezindonga, amabhodi ezindonga, amapayipi amanzi nezintambo zikagesi ezilungele ukuxhunywa, isisefo sokumunca umoya nendawo kabhavu. Ikamelo liphothulwa ngemva kokufakwa kwe-pod esakhiweni.
May 22, 2014—ISakhiwo Sokulungisa Izimoto
Kufakwa amapayipi amanzi ngaphansi kwesakhiwo. Lapho kusakhiwa, le ngxenye izosetshenziselwa ukuphakela izisebenzi ezingaba ngu-500, ezingu-300 ezengeziwe zihlale kwezinye izindawo kulesi sakhiwo. Ngasekupheleni komsebenzi, lawo makamelo okudlela esikhashana ayosuswa, isakhiwo siqedelwe bese sisetshenziselwe ukulungisa izimoto.
June 2, 2014—ISakhiwo Sokulungisa Izimoto
Kuhlelenjwa inhlabathi ethakwe ngobunjiniyela ukuze kutshalwe kuyo phezu kophahla. Uphahla olutshaliwe lusiza indawo ngokonga ugesi, ukunciphisa izikhukhula zogadasi nokucwenga amanzi emvula.
June 5, 2014—AmaHhovisi Okuqondisa/ISakhiwo Sezinkonzo Zomkhaya
Le ngxenye izoba nezakhiwo ezintathu ezihlangene ezinendawo engamamitha-skwele angu-42 000 iyonke. Lapha, inkontileka ifaka amaringifosi ezinsika.
June 18, 2014—ISakhiwo Sokulungisa Izimoto
Kunanyathiselwa itiyela ophahleni ngethoshi elishisayo. Amabhande avikela izisebenzi ukuba zingawi.
June 24, 2014—ISakhiwo Sokuhlala U-C
Kufakwa amapayipi afike esehlanganisiwe nezinto zesimiso sokushisisa nokupholisa. Amaphesenti angaba ngu-35 oFakazi abasebenza esakhiweni saseWarwick angabesifazane.
July 11, 2014—EMontgomery, ENew York
Le ndawo esetshenziselwa ukugcina izimpahla nokuhlanganisa okwakhiwayo yatholakala ngo-February 2014 ukuze yelekelele emsebenzini wakwakha. Ngaphakathi ingamamitha-skwele angu-20 000. Izinto ezimhlophe ezingasekhoneni eliphezulu kwesokudla esithombeni zingama-pod ayizindlu zangasese aselungele ukuthunyelwa esakhiweni.
July 24, 2014—ISakhiwo Sokuhlala U-C
Maphakathi nesithombe ubona ikhona elisenyakatho-mpumalanga lesi sakhiwo. Sizohlalisa amalungu angaba ngu-200 omkhaya wasendlunkulu. Iningi lamakamelo lizoba amamitha-skwele angu-30 nangu-55 ubukhulu futhi anekhishi elincane, indlu yangasese, novulandi omncane.
July 25, 2014—ISakhiwo Samashabhu/Sendawo Yokupaka Yomkhaya
Kulungiswa isiza. Ngasekhoneni eliphezulu kwesobunxele esithombeni, kugaywa amatshe avela esizeni ukuze asetshenziswe kamuva esakhiweni. Lapho umsebenzi wonke usuphothuliwe kuyoba sekususwe inhlabathi engama-cubic meter angu-260 000 kulesi siza saseWarwick site. Usuku ngalunye kusebenza amaloli enhlabathi angu-23 ngokwesilinganiso.
July 30, 2014—ISakhiwo Sokulungisa Izimoto
Kuyatshalwa phezu kophahla.
August 8, 2014—Isiza SaseWarwick
Indlela indawo ebukeka ngayo uma ungaphezu kwesakhiwo samahhovisi kuyi-crane enkulu, ubheke eningizimu-ntshonalanga. Ekhoneni eliphansi kwesobunxele esithombeni kuneSakhiwo Sendawo Yokuphaka Yezivakashi esesiqediwe, esigcwala mfi izimoto zezisebenzi usuku ngalunye. Abanye oFakazi basuke ezindaweni eziqhele ngamahora angu-12 uhamba ngemoto, bezovolontiya izinsuku ezintathu noma kuya kwezine kuphela.
August 13, 2014—ISakhiwo Sokulungisa Izimoto
Umsebenzi uya ngasemaphethelweni egumbili lokudlela lesikhashana. Kuzosetshenziswa ama-screen e-video (angakafakwa) nama-speaker akuyi-ceiling ukuze izisebenzi zikwazi ukuthamela ukukhulekela kwasekuseni nezinye izimiso ezingokomoya lapho ziqhutshwa ehhovisi legatsha lase-United States.
August 14, 2014—AmaHhovisi Okuqondisa/ISakhiwo Sezinkonzo Zomkhaya
Kuthelwa ukhonkolo wesitezi sokuqala. Ngakwesokudla, isisebenzi sisebenzisa umshini onyakazisa ukhonkolo ukuze kuqinisekwe ukuthi umoya awuvaleleki ngaphakathi kukhonkolo nokuthi ukhonkolo ungene wahlala kahle ezindaweni ezifanele.
Amapayipi kagesi asengxenyeni emaphakathi yesakhiwo aselungele ukumbozwa ngokhonkolo wengaphansi lesakhiwo.
Ukuthelwa kukakhonkolo wesitezi sokuqala ngaphambi nje kokuba kuphele. Lona yiwona msebenzi omkhulu kunayo yonke eyokuthela ukhonkolo esisayenzile eWarwick. Ukhonkolo waxovelwa khona lapha esakhiweni, walethwa ngamaloli kakhonkolo angu-8 nama-pump amabili, kwathatha amahora angaba ngu-5 1/2 ukuwuthela. Maphakathi nesithombe kunenye yezindawo ezinezitebhisi kulesi sakhiwo.
August 14, 2014—ISakhiwo Sokuhlala U-C
Kwakhiwa uthango ophahleni. Maphezudlwana esithombeni, kwakhiwa ingaphansi lesakhiwo sokuhlala u-A.
August 15, 2014—ISakhiwo Sokuhlala U-C
I-pod esiphothuliwe yekamelo lokugeza ilethwa nge-crane esitezi sosithathu. Kulo msebenzi waseWarwick, kuningi okwakhelwa kwenye indawo kufike sekuhlanganisiwe, okunciphisa ukuminyana esakhiweni kusheshise nomsebenzi wokwakha.
August 20, 2014—ISakhiwo Sokuhlala U-C
Izinkontileka zifaka ama-panel kakhonkolo odonga akhiwe kusengaphambili asiza ekunciphiseni ugesi osetshenziswayo. Ukhonkolo udayiwe, okwenza ama-panel angadingi kupendwa nakunakekelwa okutheni. Ukuwafaka kuyashesha, okuzosiza ekuphothuleni umsebenzi ngesikhathi.
August 31, 2014—ISakhiwo SaseWarwick
Indlela esibukeka ngayo uma usekhoneni eliseningizimu-ntshonalanga. Maphakathi nendawo, kulungiselelwa isitezi esilandelayo sesakhiwo sokuhlala u-D; ngemva kwalesi sakhiwo, isakhiwo sokuhlala u-C sesiya ngasemaphethelweni.